Caritas Gibxii / Caritas - UNHCR Egypt
Tajaajila Fedhii Bu’uuraa
Komii/ Jila/ Gaaffii Ol’iyyannoo Gargaarsa Maallaqaa & Nyaataa
UNHCR gargaarsa maallaqaa namoomaa kan kennu baqattootaa fi koolu galtoota baay’ee saaxilamoo ta’aniif qofa yeroo murtaa’eef. Odeeffannoo dabalataa sagantichaa fi/ykn gaaffii komii, jila fi gaaffii ol’iyyannoo maallaqa callaa wajjin walqabatee jiruuf, maaloo Caritas qunnamaa.
Mee 15946 bilbilaa
Isniina – Jimaata: 8:30 -15:30
Namoota Fedhii Addaa Qaban Tajaajila & Gargaarsa Yeroo Muddamaa
Caritas yoo du’an gargaarsa hatattamaa ni kenna, akkasumas namoota fedhii addaa qabaniifi maanguddootaaf tajaajila ni kenna. Gargaarsi hatattamaa karaa pirojektii “Namoota Fedhii Addaa Qaban” jedhamuunis ni kennama:
Kaayiroo: 02 3867 366 – 01279760329 – 01279760318
WhatsApp: 011 0284 3159
Isniina – Jimaata: 8:30 – 15:30
Jimaataa fi Wiixata malee guyyaa guyyaan: 8:30 -15:30
Wiixata – Kamisa: 9:00 – 16:00
WhatsApp Aleeksaandiraa fi Daamiyeetaa: 01118897564
Eegumsa Daa’immanii / Gargaarsa fi Mana Jireenyaa Daa’imman Nama Hin Qabnee fi Adda Ba’aniif
Caritas daa’imman nama waliin hin deemne & addaan ba’an ni deeggara. UNHCR biratti galmaa’uu booda, daa’imni sun guyyaa dhaabbatichi Eegumsa Daa’immanii madaallii faayidaa kee gaarii ta’e gaggeessu Garee Eegumsa Daa’immanii UNHCR irraa ni beeksifama . Madaallii faayidaa gaarii erga godhamee booda qofa, gargaarsa maallaqaa keessan adeemsisuuf gara Caritas Garden City deemuun yeroo isin barbaachisu isin beeksifna. Maaloo guyyaa beellama gargaarsa maallaqaa keessan akka hin darbine mirkaneessaa; yoo kana hin taane maaloo dursitanii hojjetaa dhimma keessanii beeksisaa. Caritas daa’imman nama waliin hin deemneef & addaan ba’aniifis mana jireenyaa deeggarsa ni kenna.
Kaayiroo: 27961771, 27964441
Isniina – Jimaata: 8:00 – 15:30
Jeequmsa Koorniyaa Irratti Hundaa’e
Eegumsa Fayyaa Sadarkaa Duraa & Ajaja Yaalaa Ji’a Ji’aan kennamu
Baqattootaa fi koolu galtoota hundaaf tajaajila eegumsa fayyaa sadarkaa duraa ni kenna.
Hubachiisa barbaachisaa: Kilinikicha daawwachuu kee dura gaarummaadhaan beellama qabachuu kee mirkaneessi.
6 Waxabajjii: 01129884420
Viilaa 48/8, Aanaa 8ffaa 8, Ollaa 2ffaa
Jimaata & Wiixata malee guyyaa guyyaa: 8:30 – 15:30
Magaalaa Garden & Magaalaa Nasr: 01129880884/ 01129880223
Magaalaa Garden: 8 daandii Abdel-Latif Bolteya, Hoteela Foor Siizin duuba
Magaalaa Nasr: 15 Mohaammad Yuusuf Muusaa
Iskindiriyaa: 0127726477/ 01120077088
WhatsApp: 0127726477/ 01129703003
10 Daandii Talaat Nomaan, buufata E-Raml
Kiiloo 21, Hospitaala El-Asafra Gharb duuba
Isniina – Roobii: 8:30 – 15:30
Daamiyeetaa: 01122000782/ 01207937255
Gamoo 81/21, Aanaa 1ffaa, Ollaa 1ffaa Masjiida Al-Rashidii cinatti
Wiixata – Kamisa: 8:30 – 15:30
Daandii El-Imam Mohamed Abdo, daandii Qanat El-Suez irraa fagaatee
Isniina: 8:30 – 15:30
Giddugala yaalaa Asr Al-Eslam, daandii ElThanawia, Masjiida El-Dafrawy cinatti argamu
Jimaata & Wiixata malee guyyaa guyyaa: 8:30 -15:30
01129880800 / 01288064703